Inogona here Linux kumhanyisa pane yakawanda quantum komputa? | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vanogona kufunga kuti panogona kunge paine "Quantum Linux" iyo inogona kumhanya pamushini unouya: iyo quantum komputa. Vamwe vanotenda kuti inochinjika uye inochinja sezvazvinogona kuitwa. Asi mhinduro kumubvunzo uri mumusoro wakaomesesa, uye chokwadi ndechekuti unogona kusatoda mhinduro yacho zvachose.
La quantum komputa Ichachinja zvakanyanya paradigm yekomputa sezvatinoiziva nhasi, uye izvo zvinoreva kushandura nzira iyo yakarongedzwa, mamwe masisitimu anoshanda, uye zvese zvawakadzidza kusvika parizvino. Shanduko inozove yakakosheswa ukapihwa mukana wakakura uyo michina iyi inogona kuunza, uye kwete chete maererano nekombuta simba, asiwo kubatsira kunzwisisa huwandu hwefizikiki pachayo.
Mhinduro ku mubvunzo ndewe NO. Iwe haugone kumhanyisa Linux, kana mamwe masisitimu anoshanda seMacOS, FreeBSD, Windows, nezvimwewo, pane yakawanda komputa. Ipapo? Izvi zvinoreva here kuti kuuya kwequantum computing ndiko kunenge kuri kupera kwemaitiro anhasi anoshanda?
Zvakanaka, chinhu chekutanga kujekesa kuti iyo quantum komputa ichine nzira refu yekuenda kunatsiridza, zvipingamupinyi zvakawanda zvekukunda, zvimwe zvinhu kupolisha, uye nguva ichiripo. Naizvozvo, ikozvino kuverenga uye mashandiro anoita achatevera nesu kwemakore mazhinji.
Pari zvino makomputa ehuwandu haana kujeka maererano nehukuru, iwo zvakare akaoma kuronga uye mune zvimwe zviitiko zvinoda kutonhora kwakasimba kwazvo kuchengetedza zvimwe zvinhu patembiricha pazasi pe 0ºC. Chinhu icho icho inofanira kubvisa pfungwa yekuti pane iri pfupi kana yepakati izwi komputa mudzimba uye havatozove mune mamwe makambani.
Chii chichaonekwa ndeyemuchina wemuchina seimwezve gore rebasa, ndiko kuti, a QCaaS (Quatum Inouya seSevhisi). Sezvauri kushandisa izvozvi zviitiko zveAWS, kana iro IBM gore, Microsoft Azure, Google Cloud, nezvimwe. Ndokunge, mamwe makambani anoda akakwira ekugadzirisa masimba, anozokwanisa kuwana mhando iyi yemuchina sevhisi mune ramangwana.
Mune mamwe mazwi, iwe unobatanidza Nemutengi kune akati quantum computer, iwe unozoisa macomputational maitiro mairi kuitira kuti agadziriswe nenzira yekukurumidza kutora mukana wehunyanzvi hwerudzi urwu rwekuverenga, uye mhedzisiro yacho uchapihwa kwauri. Sezvazviri zvino nenyaya yebasa reIaaS ...
1 Saka hakuzovi neLinux pakombuta yakawanda?
2 Muenzaniso unoshanda
Saka hakuzovi neLinux pakombuta yakawanda?
Aihwa, hakuzovi ne linux, kana mamwe maSSOO anozivikanwa, mune yakawanda komputa. Izvo zvichave zviripo vatengi vanogona kumhanyisa Linux kana chero imwe yazvino inoshanda sisitimu yekubatanidza kubva pairi kune imwe yeaya michina inoshanda sevhisi.
Naizvozvo, sekureba sekuwanda kwekomputa hakusi iro paradigm rinotonga uye vatengi vane mhando yemuchina iyi havana kutsiviwa (chimwe chinhu chandisingafungire parizvino), pacharamba paine maLinux masisitimu, * BSD, Windows, macOS, nezvimwe. Saka, usazvidya moyo nezveLinux, ichine hupenyu hwakareba hwasara.
Kana zvichinge zvakaoma kunzwisisa, ini ndichakuudza muenzaniso. Semuyenzaniso, D-Wave Maitiro yakagadzira zvimwe zvinonakidza zvemakomputa mamodheru. Iyi michina inowanikwa kuburikidza neAPI uye nekushandisa mimwe mitauro (Python, C ++, Java, MatLab, ...) kuronga mabasa pamushini uyu. Iyi API inogona kuwanikwa kubva kune inomiririra inoshanda sisitimu iyo inogona kunge iri Linux, Windows, nezvimwe, ichimhanya pamushini unoshanda sevatengi.
Mumwe muenzaniso ndeye quantum komputa IBM Q, iyo inogona kuwanikwa ikozvino kuburikidza webhu iyo IBM yakaisa pamunwe wako uye mauri iwe unogona kutoita mamwe mabasa kuti uedze iyo. Kunyangwe iwe uri kushandisa muchina uyu, yako yekushandisa system ichiri yako yakajairwa imwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Inogona here Linux kumhanyisa pane yakawanda quantum komputa?
Panfrost ikozvino ine OpenGL 3.1 tsigiro yeMali GPUs